Macluumaad - AngelBiss Healthcare Inc.
AngelBiss waa kan ugu horreeya adduunka ee diirada saaraya isbedbeddelka isku-darka oksijiinta iyo sidoo kale kan ugu horreeya ayaa si sax ah u xakameyn kara heerka isbedbeddelka oksijiinta ee 0.1% (heerka celceliska warshadaha wuxuu ka sarreeyaa 0.6%)
In AngelBiss cilmi baarista shaybaarka lagu ogaaday in heerka isbedbeddelka hoose macnaheedu yahay in isku-urursiga oksijiinta uu haysto fursad yar oo cillad ah oo ku jirta qaybo kasta oo ku xiran, sidaas awgeed mashiinka uga dhigo inuu ku noolaado nolol qumman oo waara. Sidaa awgeed Degganaanta iyo Tayada labadaba waxaa lagu hubiyaa tiknoolajiyadda keliya. Taasi waa soo jiidashada ugu weyn ee alaabadayada AngelBiss.
In ka badan 17 sano oo daraasad injineernimo ah oo ku saabsan wax soo saarka gaaska, injineerada AngelBiss waxay inta badan ku howlan yihiin horumarinta, cilmi baarista, dhoofinta iyo soo saarista wax soo saarka tayada leh ee ku saabsan daaweynta oksijiin, daaweynta qalliinka, daaweynta neefta iyo daaweynta cudurka. Iyada oo leh faa'iidooyinkeeda cilmi-baarista iyo awooda injineernimada awoodda leh, AngelBiss waxay siisay macaamiil badan oo tayo sare leh macaamiisha adduunka oo idil, oo ay ku jiraan Malaysia, India, Iraq, Spain, Netherlands, Ukraine, Chile, Peru, Japan, Australia, iwm.
AngelBiss dhammaan alaabooyinka waxaa loo hoggaansamayaa heerarka tayada Teknolojiyada USA iyo waxqabadka ugu fiican ee cimriga elektaroniga. Wax soo saarku waa mid qiimo ku fadhiya oo deegaanka u roon, fududna in la ilaaliyo, taas oo cadeysay kalsoonida ay u qabaan adeegyo tiro badan oo adduunka oo dhan ah.
AngelBiss waxay xaqiijineysaa nabadgelyadaada adoo adeegsanaya alaabteeda, adoo siinaya adeegyo adeegsi wanaagsan taageerayaasha qaybiyaha.
AngelBiss waxay wadaagaan qeybaha Maamulka, Waxsoosaarka, Maamulka, HR, Suuqgeynta, R&D Research and Development, Kormeerka Tayada, Bakhaarka, iibka kahor iyo Adeegga iibka kadib, Xiriirka Waxsoosaarka Badaha, iwm. Waax waliba waxay qabataa waajibaadkeeda, iyadoo si dhab ah oo si xilkasnimo leh, oo aad ugu dadaala howlaha wanaagsan ee kooxda. Balaadhinta iyo horumarka AngelBiss, waxay yeelan doontaa qaybo aad iyo aad u badan si loo sifeeyo.
Sinopec Group Senior Mechanical Designer (SGSMD) & injineer Mr. Huang waxay aasaaseen shirkadda SinZoneCare Medical sannadka 2004 suuqyada caafimaadka gudaha, inta badan waxay sameynayaan ganacsiga ODM ee loogu talagalay wax soo saarka caafimaadka iyo warshadaha. Intii lagu jiray 14kii sano ee la soo dhaafay, SinZoneCare waxay naqshadeysaa oo ay soo saartaa darsin ka mid ah wax soo saarka oksijiinta (shirkadaha wax soo saarka maxalliga ah) waxayna la kulmaan guul weyn gaaska gaaska. Markii sanadka 2017, injineer injineer iibiya Mr Arvin Du uu ku biiro Mr. Huang oo uu bilaabo inuu mas'uul ka noqdo la tacaalida ganacsiga dhoofinta magaca AngelBiss. Shirkaddu waxay dhaqaajineysaa horumarka ballaarinta adduunka illaa maanta.
ANGELBISS waa summad tayo leh oo ay leeyihiin shirkadda AngelBiss Healthcare Inc (USA) iyo AngelBiss Medical Technology (Shiinaha). ANGELBISS waxay si guul leh uga diiwaangashan tahay astaan ​​gaar ah California USA, Dusseldorf Germany iyo Shanghai China. Macnaha astaanta iyo sidoo kale qiimaha asaasiga ah ee shirkadda waxaa lagu muujiyey sida soo socota:
Isku darka Angel Broken Wings iyo magaca Ingiriisiga ee 'ANGELBISS'. Malaa'igtu waa dabeecad khayaali ah oo ku jirta quluubta dadyowga dalal kala duwan oo injiilka keena, waana nooc ka mid ah risiqa ruuxa. Sawirka caasimada “A” kaliya wuxuu umuuqdaa qof, kaliya hal dhinac oo baalasha ka mid ah waxay muujineysaa dhameystir la’aantiisa, maxaa yeelay xaalada maskaxeed ee qofka jiran waa mid aan dhameystirneyn, dhameystirnaantana kaliya waxey sharraxeysaa in qofkaan u baahan yahay daryeel. Biss macnaheedu waa Duco. Muuqaalka qaansoroobaad cas ayaa ka dhigan in malaa'igtu qofka u keento rajo.
Waad ku mahadsan tahay Mudane Foo iyo Mr. Joe oo reer Malaysia ah oo kugula taliyay magaca ANGELBISS.
AngelBiss, Daryeel Isaga, Kaaga iyo Caafimaadkayga